सेक्स गर्न पैसाको कुरा नमिल्दा यूवतीको हत्या - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
सेक्स गर्न पैसाको कुरा नमिल्दा यूवतीको हत्या
Published On : २ बैशाख २०७५, आईतवार १५:४२
काठमाडौं, २ वैशाख– गत चैत २३ गते काठमाडौंको टोखास्थित एक होटेलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी युवतीका हत्यारालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
टोखा–९ मिलनटोलस्थित न्यू भुमेश्वरी एण्ड अर्जुन पाहुना घरको कोठा नम्बर २०३ मा युवतीको हत्या भएको थियो । युवतीको हत्यामा संलग्न सल्यानको सारदा नगरपालिका–१ बस्ने २२ वर्षीय गोपाल शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
सल्यानका गोपाल शर्मा विगत केही महिनादेखि रामेछापमा घर बनाउने काम गर्दै आएका थिए । उनी चैत २१ गते घुम्नका लागि भन्दै काठमाडौं आए ।
रामेछापबाट आएको पहिलो दिन कलंकी क्षेत्रमा बसेर दोस्रो दिन गोंगबु बसपार्क क्षेत्रमा पुगे । सडकमा डुल्दा डुल्दै एक युवती भेटिइन् । कुराकानी शुरु भएपछि दुवैजनाबीच होटेलमा संगै बस्ने सहमति हुन्छ ।
‘मैले चिनेका मान्छेको होटेल हो’ भन्दै युवतीले नै टोखाको न्यू भुमेश्वरी एण्ड अर्जुन पाहुना घर पुर्याइन् । होटेल सञ्चालकले उनीहरुका लागि पहिलो तलाको २०३ नम्बरकाे कोठा व्यवस्था गरे ।
कोठामा पुगेपछि युवतीले रक्सी पिउने प्रस्ताव राखिन् । युवकले आफ्ना लागि बियर मगाए भने युवतीका लागि भर्जिन नामको रक्सी पुग्यो । दुवैजनाले रक्सी पिए ।
रक्सी पिएपछि गोपालले युवतीसँग शारीरिक सम्पर्क गर्न खोजे । तर युवतीले शारीरिक सम्पर्क गर्न मानिनन् । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका अनुसार त्यसपछि दुवैजनाबीच बोलाबोल भयो ।
युवतीले युवकलाई तथानाम गाली गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आफू यसअघि पनि केटाहरुलाई शारीरिक सम्बन्ध राख्ने लोभ देखाएर पैसा लुट्ने गरेको भन्दै युवतीले युवकमाथि आक्रमण गर्न खोजेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसपछि युवकले युवतीको घाँटी थिची हत्या गरेको घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले बताए ।
युवतीको हत्या गरेर राति १ बजे नै कोठाबाट निस्किएका गोपाल त्यसरात नयाँ बसपार्क नजिकको गंगा सिनेमा हल नजिक सडकमै सुते । विहान भएपछि कलंकीको सार्वजनिक शौचालयमा नुहाएर दिउँसो ४ बजेको गाडी चढि नेपालगन्ज हुँदै महेन्द्रनगर पुगे ।
महेन्द्रनगरमा लुकुछिपी बस्दै आइरहेका गोपाललाई महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगन्जबाट खटिएको टोलीले चैत ३० गते कञ्चनपुरेको गड्डाचौकीबाट पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनीविरुद्ध कर्तब्य जान मुद्दामा अदालतबाट ७ दिनको म्याद थपि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
हत्या गरिएकी युवतीको वास्तविक ठेगाना र नाम भने पत्ता लाग्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि बसपार्क क्षेत्रमा सोधुपुछ गर्दा उनको नाम रियाना अधिकारी र उमेर २३ वर्ष भएको पत्ता लागेको छ ।
उत्तरी गोरखामा पहिरोको समस्या ज्यूँका त्यूँ
उत्तरी गोरखामा पहिरोले बाटो बगाएपछि स्थानीयबासीले आवतजावतमा सास्ती खेपिरहेका छन् । ठाउँठाउँमा बाटो पहिरिएर बूढीगण्डकीमा